सिके राउतसंग वार्ता हुँदैन,विप्लवसंग अनौपचारिक छलफल भैरहेको छः संयोजक पाण्डे
November 1, 2018 खबर खुराकLeaveaComment on सिके राउतसंग वार्ता हुँदैन,विप्लवसंग अनौपचारिक छलफल भैरहेको छः संयोजक पाण्डे
काठमाण्डौ, १५ कात्तिक । सरकारले भदौ ८ गते सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका र संविधानसंग असन्तुष्ट रहेका समुहसंग बार्ता गरि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उदेश्यले सरकारको तर्फबाट बार्ता टोली घोषणा ग¥यो ।
बार्ता टोलीको संंयोजक नेकपाका सांसद समेत रहेका सोमप्रसाद पाण्डेले गरिरहेका छन । सरकारी वार्ता टोलीको कार्यालय कानुन मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ । असन्तुष्ट समूहसंग बार्ता गरिरहेका टोलीका संयोजक पाण्डे संग यसकाठमाण्डौका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
निक्कै व्यस्त हुनुहुन्छ,असन्तुष्ट समूहसंगको वार्ता प्रकृया कसरी अघि बढीरहेको छ ?
सरकारले हामीलाई भदौ आठ गतेबाट जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी पूरागर्नको लागि हामि असाध्यै मसिनो ढंगबाट लागेका छौ । हामिलाई दिएको कार्यादेश अनुसार नै संविधान र राज्यसंग असन्तुष्ट रहेका विभिन्न ४२ समूह पहिचान गरेका छौ । ती समूहसँग औपचारिक र अनौपचारिक सम्पर्क स्थापित गरिरहेका छौ । यो बीचमा १७ वटा समूहसँग वार्ता भइसकेको छ । केही सशस्त्र समूह पनि वार्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छन् । ती समूहसंग पनि छिट्टै कुराकानी हुन्छ ।
१७ वटा समूहसंग वार्ता भैसक्यो भन्नु भयो त्यस भित्र सुरक्षाका मुख्य चुनौति भनेर गृहमन्त्रालय र नेपाली सेनाले किटान गरेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सिके राउतको समूह पर्यो कि छैन ?
हामीले काम थालनि गरेसंगै वार्ताको लागि पहल कदमि लियौ र सबैको गतिविधिलाई बुझने र अध्ययन गर्नेकाम सुरु भयो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसंग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भैरहेको छ । वार्ताको बातावरण तयार पार्नको लागि विप्लवको नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्नेकाम पनि भयो हामीले सरकारसंग अनुरोध पनि गर्यौ सरकारले प्रकाण्ड लगाएतका नेतालाई रिहाइ गरिदियो । विप्लव संग औपचारिक वार्ता त भएको छैन तर बातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ ।
सिके राउतसंग नि ?
त्यही त म भन्दै छु , हामीले सिके राउतको गतिविधिलाई नियाल्यौ उ तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने मिसन बोकेर हिडेको छ राज्य विरुद्ध नै लागेको समूहसंग वार्ता गर्न जरुरी ठानेनौ र सिके राउतसंग वार्ता हुँदैन ।
सुरक्षा थ्रेट त छ त उबाट त्यसलाई समाधान गर्नु पर्दैन र ?
त्यो राज्यको निगरानीमा छ हामीलाई प्राप्त कार्यादेश संविधानसंग असन्तुष्ट रहेका विगतमा वार्ता प्रकृयामा आई सहमति गरेका तर विभिन्न कारणले राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका समूहसंग छलफल गर्ने हो । सिके राउतको लागि सुरक्षा निकायले आवश्यक निगरानी गरिरहेको छ ।
भनेपछि सिके राउत संग वार्ता नै गर्नु हुन्न होइन त ?
गर्दैनौ पहिले उ सच्चिएर आउनु प¥यो देश टुत्र्mयाउने कुरा छोडेर राजनीतिक मुद्दा समाउनु पर्यो अनिमात्र वार्ता हुन्छ । किनकि ऊ राजनीतिक रुपमा राज्यसँग आफ्ना माग लिएर आएको देखिँदैन । हामी भनेको राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ हो । त्यसकारण हामी राजनीतिक र संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहसँग मात्र वार्ता गर्छौंं । सिके राउत त्यस्तो होइन ।
असन्तुष्ट समूहका कस्ता कस्ता माग रहेछन ?
प्रायको माग आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइ नै हो । तराईमा हिजो सशस्त्र समूहले हत्या, विष्फोटन जस्ता घटना गराए । निकै अशान्ति पनि मच्चाए । बरु ती समूहको माग सामान्य देखिन्छ, एउटा गोइत समूह बाहेक ।
अरुले शान्तिपूर्ण रुपमा जीवनयापत गर्न पाउँ भन्ने कुरा गरेका छन् । कतिपय समूहले देशै हामीले चलाउन पाउनुपर्छ भन्नेखालका रमाइला माग पनि राखेका छन् । लिम्विुवानले पूर्वका ९ जिल्ला लिम्वुवान प्रदेश हुनु पर्छ भनेको छ । खासगरी लिम्बुवान राज्यको माग राख्ने समूह र किरात समूहका मागहरुमा चाहिँ जटिलता देखिन्छ ।
उनीहरु त्यो भूभागको अलग राज्य मागिरहेका छन् । लिम्बुवानले अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? भनेर वार्ताको टेबुलमा प्रश्न उठायो । त्यो त हामीले पूरा गर्ने माग पनि होइन । यो वार्ता टोलीको जिम्मेवारी र अधिकार पनि छैन ।केही समूहसँग अलि जटिल छ वार्ता ।
तर, धेरैजसो समूहचाहिँ अब हामी हिजोका गतिविधि त्याग्छौं । हाम्रा कार्यकर्ता मुक्त गरिदिनुपर्छ, हाम्रो समूह विघटन गरेर हामी संविधानको मूल दायरामा आएर राजनीतिक गतिविधिको निम्ति निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन चाहान्छौं भन्नेसम्म पुगेका छन् ।
केही जटिलता छन् । विगतमा भएका सहमति सम्झौता पालना भएनन् भन्ने गुनासो धेरैको छ । हतियार बुझायौं, तर हामी सामान्य जीवनमा फर्किन पाएनौं भन्ने गुनासो पनि छ । जेलमा भएका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा अलि जघन्य छ । ज्यान केस, हातहतियार, विष्फोटक पदार्थका केसहरु छन् । कतिपयका लागु पदार्थ र संगठित अपराधका मुद्दा पनि भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन जटिल छ । मुख्य कुरा, राज्यले यी सबै समूहलाई मूल धारमा ल्याएर यस्ता समूह विघटन गर्न सघाउने सोचेको छ । त्यसमा यो वार्ता फलदायी हुनेछ ।र हामी त्यतातिर पहल गर्छौ ।
आलेख – भारतीय फूल विस्थापन गर्न चाहन्छन् तिलोत्तमाका महिलाहरु
सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा : डा कोइराला
देउवाले नेतृत्व छोडेहुन्छ, अब हामी चलाउँछौं : कोइराला (भिडियोसहित)
April 30, 2018 खबर खुराक
भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ः मन्त्री यादव
काँग्रेसमा नेताहरुबीच पानी बाराबार : अधिवेशन सर्ने पक्का, अनसनको तयारी !
October 24, 2018 खबर खुराक